मल नल्याउने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही नगर्न उच्च अदालत पाटनको आदेश - krishipost.com
उच्च अदालत पाटनले समयमा मल नल्याउने दुई ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सोमबार अदालतका न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीको एकल इजलाशले हुमनाथ कोइरालाको होनिको मल्टिपल प्रालि र शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ इनटरप्राइजेजलाई कारबाही नगर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले यस विषयमा क कसो भएको हो ? निनवेदकको मा बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कराण र प्रमाण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना तामेल भएका मितिले बाटाको म्यान बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । अदाललते रितपूर्वक लिखित जवाफ पेश गर्न पनि लिमिटेडका नाममा आदेश दिएको हो ।
‘छलफलका लागि दुवै पक्षलाई राखी छलफल गराउन उपयुक्त हुने देखिँदा भदौ ३१ गतेको पेशी तारेख तोकी सो छलफल पेशीमा उपस्थित हुनु भनी विपक्षीलाई सूचना जारी गरी सो अवध सम्मका लागि प्रत्यर्थी कम्पनीको भदौ २१ गतेको निर्णय एवं सो निर्णय बमोजिम जारी भएको भदौ २२ को पत्रसमेत कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली ०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । विपक्षीलाई यो आदेश दिनूहोला’, अदालतको निर्णयमा भनिएको छ ।